फेसन Archive - Alagdhar
लक्ष्मीको पार्लरमा किन पुगे धिरेन र रविन्द्र?
कलाकार धिरेन शाक्य र रविन्द्र खड्का सहितका कलाकार बुधवार सुन्धारामा रहेको काठमाण्डौ मलको एउटा ब्युटिपार्लरको उदघाटनका गर्न पुगे । विगत लामो समय देखी सौन्दर्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी लक्ष्मी मल्लले संचालन गरेको लक्ष्मी ब्युटि स्टुडियो एण्ड युनिसेक्स सैलुनमा उनीहरु जम्मा भएका थिए । गुणस्तरीय र सस्तो सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ काठमाण्डौ मलको चौथो तल्लामा सो सैलुन खोलिएको संचालक मल्लले बताइन् । बजारमा रहेका सयौ ब्युटि पार्लर भएपनि आफुलाई अब्बल सावित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने उदेश्य संचालक मल्लले राखेकी...
मिस नेपाल युएसए २०१८’का लागि २१ प्रतियोगी
काठमाण्डौ। ‘मिस नेपाल युएसए २०१८’का लागि २१ प्रतियोगी छानिएका छन् । प्रतियोगिताको यो छैठौ संस्करण हो । बिभिन्न चरणको अडिसनबाट यि प्रतियोगी छानिएको कार्यक्रम ब्यवस्थापन जिम्मा लिएको अमेरिका नेपाल ११ इन्टरटेनमेन्टले जानकारी दिएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डालस शहरमा १९ अगष्टमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको अन्तिम स्पर्धामा अदीति श्रेष्ठ, आइशा ओझा, एन्जिला पौडेल, वर्षा वराल, विएन्का अधिकारी, विना श्रेष्ठ, दिलाशा न्यौपाने, जया त्रिपाठी, कृति ढुगेल, लाक्पा शेर्पा, नेलिया गुरुड, पोसा थापा, प्रवेशीका खत्री, प्रियंका तिमिल्सेना, सपना महर्जन, श्रेया नेपाली,...
काठमाडौं — करिअर बनाउने बाटाहरू थुप्रै छन् । तर, मनले खाएको काम गर्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ । त्यसैमा नै लुकेको हुन्छ सन्तुष्टि । यतिखेर सिर्जनशील पेसाप्रति युवापुस्ता आकर्षित हुँदै छन् । सम्झना परियार फेसन डिजाइनिङमा सानैदेखि रुचि राख्ने गर्थिन् । मन छुने पहिरनका स्केच उनी कापीमा कोर्ने गर्थिन् । प्लस टु सकेपछि भने सम्झनाले फेसन डिजाइनिङ अध्ययनमा रुचि देखाइन् । कुन कलेज ? कहाँ पढ्ने थाहै थिएन । यसपछि उनी आफैंले खोजेर नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलजीमा भर्ना भएको...
जंगलमा प्रकृतिमैत्री फेसन शो
वरिपरि रूख, बीचमा दक्षिणबाट उत्तर फर्किएको स्टेज । लाइट पुगेको ठाउँबाहेक अन्यत्र निष्पट अँध्यारो । सम्साँझै बन्द भइसक्ने धरान ८ स्थित यलम्बर सामुदायिक वनको गेट गएको शुक्रबार (पुस ७ गते) भने राति अबेरसम्म खुला थियो जबकि अरू समय भने त्यतिखेर सुनसान हुन्थ्यो । यलम्बर वन समूहलाई यलम्बर पार्क पनि भनिन्छ । यो वन पूर्वमा गठन भएको पहिलो सामुदायिक वन हो भने पर्यापर्यटन (इको टुरिज्म) को अभ्यास गर्ने नेपालकै पहिलो नमुना वन समूह पनि हो । यही वन क्षेत्रमा गएको...
रेखा र दीपामध्ये को सेक्सी ?
रेखा थापा र दीपाश्री निरौलामध्ये को होला सेक्सी ?
३२ लाख घुस सहित राजश्व कार्यालय कर्मचारी पक्राउ
जनकपुर, ३० असोज । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका कम्प्युटर अप्रेटरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको छ । कम्प्युटर अपरेटर राजकिशोर महतोलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासको टोलीले सोमबार ३२ हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो । सेवाग्राहीले पसल बन्द गरि पाऊ भनि निवेदन दिएकोमा सो कामका लागि कर्मचारी महतोले ३२ हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । त्यस पश्चात ती सेवाग्राहीले अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी दिएका थिए । ती सेवाग्राही सोमबार...
मेस्सीको ह्याट्रिकमा अर्जेन्टिना विश्वकप छनोट
२५ असोज,इक्वेडरको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा अर्जेन्टिना विश्वकप छनौट भएको छ । कप्तान लिओनल मेस्सीको ह्याट्रिकसँगै अर्जेन्टिनाले विश्वकप खेल्ने मौका प्राप्त गरेको हो । केही बेर अगाडि समाप्ती भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई ३–१ गोल अन्तरले हराएको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा इक्वेडरले पहिलो मिनेटमा गोल गरेको थियो । इब्राको गोलले अग्रता लिएको इक्वेडरले अन्तिम समयसम्म कायम राख्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो । मेस्सीले १२ औं मिनेटमा बराबरी गोल भने २० औं मिनेटमा दोस्रो र ६२ औं मिनेटमा तेस्रो...
जालपा (खोटाङ) : किराँत राई आफ्नो सांस्कृतिक राजनीतिक भौगोलिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था भएको समूह...